HS:- Wararka laga helayo gudaha wadanka Kenya ayaa sheegaya in ay hada muuqaneyso in ay gudaha wadankaas galeen amaba saldhigyo militeri ku leeyahiin kooxda Shabaab xili ay dhawaan ku dhawaaqeen iney dagaalkii ay ka wadeen gudaha Soomaaliya u weeciyeen dalka Kenya.
Wararka qaarkood ayaa sheegaya in ay hada walwal badan ka qabaan dowlada Kenya halkii sahayda loo marsiin lahaa ciidamada ka jooga gudaha Soomaaliya. dhawaan ayey aheyd markii ay si lama filaan ah dowladaha reer galbeedka ugu dhawaaqeen in ay dalka Kenya kala baxayaan dadka ka jooga siiba wadamo ay ugu horeeyaan dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska.
Dhaqaalaha wadanka Kenya ayaa ku yimid hoos u dhac xoogan taasi oo loo aaneynayo dadkii dalxiisayaasha ahaa oo hoos u dhacay dhaqaalahaas oo ay ku tiirsaneyd dowlada Kenya amaba shacabka wadankaas oo shaqooyin kala nooc ah ku qabay.
Inkasta oo aan la dheyelsan karin hadalka Shabaab hadane waxuusan shaki ku jirin in ay hada soo baxayaan calaamado muujinaya iney gudaha dalka Kenya ku leeyahiin saldhigyo militeri marka la eego dagaalkii qorsheysnaa ee ay dhawaan la galeen ciidamada Kenya ee ka dhacay agagaarka magaalada Mardhera.
Marka laga soo tago hanjabaada kooxda Shabaab ayaa hadane waxaa soo baxaya warar sheegaya in ay dowladaha reer galbeedka qaarkood qorsheynayaan iney dalka bariga Africa ku yaala ee ahda miiska u saaran oo ay doonayaan iney ku bedelaan dalka Kenya amaba uu u galo booskii ay Kenyaq ku jirtay uu yahay wadanka Ugandha taasi oo muujineysa in loogu talo galay dalka Kenya markii mushkilad la geliyey in looga baxay.
Isku soo duuboo hadii ay ka dhabeyaan xarakada Shabaab iney dagaalkooda u weeciyeen dalka Kenya waxaa laga yaabaa iney taageero badan ka helaan gudaha Soomaaliya oo ay dhalinyaro badan u soo diraan wadanka Kenya maadaama ay dowlada Kenya dhawaan shacabka Soomaaliyed ula dhaqantay si aan biniaadami nimada ku jirin.
La soco wararkeena danbe iyo xaalada wadanka Kenya oo hada wax badan ka duwan siduu ahaa dhawr sano ka hor.
· admin on May 23 2014 00:30:06 · 0 Comments · 1387 Reads ·
14,612,302 unique visits